Gumiguru. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/10/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 28/09/2021 18:01 | Comics, Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
October inouya nevakawanda uye yakanaka nhau dzekunyora kutarisana nematsutso nenzira yakanakisa. Uye sezvo zvisingaite kuunganidza ese, izvi ndizvo kusarudzwa kwangu kwematanhatu mazita. Novel nhema, comic, Novel nhoroondo kana nyaya childish yakatarisana nemapati eKisimusi asiri-kure-kure.
1 Chakavanzika cheApothecary - Sarah Penner
2 Kufira munaNovember - Guillermo Galván
3 Iyo yeKisimusi Nguruve - JK Rowling
5 Theodora, Chrysalis weByzantium - Jesús Maeso de la Torre
6 Blacksad 6 - Zvese zvinowira (Chikamu chekutanga) - Juan Díaz Canales naJuanjo Guarnido
Chakavanzika cheapothecary - Sarah Penner
Sarah Penner munyori weAmerica ane kutanga kwegore rino munoverengeka haaigona kuve akawedzera kupenya. Iye zvino tasvika pano zita rekutanga iro rakatoturikirwa mumitauro inodarika makumi mana uye rakatorongedzerwa kugadziridzwa kweterevhizheni.
Pakutanga tinoenda ku XNUMXth century London, uko kune chemishonga yakavanzika kwazvo inotakura Nella, mukadzi asinganzwisisike, ane runyerekupe rwekupa muchetura muchimiro chemushonga kune avo vanofanirwa kuushandisa kurwisa varume vanovashungurudza. Asi kana muchengeti wake, musikana ane makore gumi nemaviri, akanganisa zvakanyanya, ramangwana rake rinokanganiswa nemhedzisiro inogara kwemazana emakore.
In the chipo, anoshuvira wezvenhau anonzi Caroline parcewell anoshandisa gore rake regumi remuchato ari ega. Asi iye achawana chiratidzo chekugadzirisa humhondi hwakauraya hwakaitika muLondon anopfuura mazana maviri emakore apfuura. Uye magumo aCaroline naNella anozopindirana mune zvakasikwa zvakavanzika, kutsiva uye nzira idzo vaviri vanogona kuponesana, kunyangwe nguva chipingamupinyi.
Kufira muna november - Guillermo Galvan
Pashure Kucheka nguva y Mhandara yeMabhonzo, Kudzoka Carlos Lombardi, Saka avo vedu vakakundwa nemapurisa epashure pehondo yeMadrid akagadzirwa na Guillermo Galvan isu tiri mune mhanza.
Iye zvino zvinotisvitsa ku Mbudzi 1942, neHondo Yenyika II kumashure uye neSpain, mukudzvinyirira kwakazara, uko kuzere vasori. Lombardi adzoka mukati Madrid uye pona sezvaunogona neako mutikitivha agency. Saka iwe haugone kuramba chero basa uye uchafanirwa kuongorora uye nekutsvagisa asinganzwisisike mutengesi wechiGerman anofamba.
Panguva imwechete iyo inoshuvira mutambi ane mukurumbira mukurumbira anoonekwa akapondwa uye mapurisa haana hany'a yekutsvaga kuti chii chiri shure kwayo. Uye Lombardi achabatwawo mune yake nyaya, uko pasina kushaikwa kwechinhu chakaipa chechipfambi, cinema uye musika mutema.
Nguruve yeKisimusi - JK Rowling
Rowling inodzokera ku nyika yevana nenyaya yekutanga yeKisimusi inoitirwa mhuri yese, kwete yevana chete.
Iye protagonist ndiye Munwe, toyi yaunofarira ye Jack, iyo inorasika pazuva ra Manheru akanaka. Asi sezvo iri rakakosha husiku hwezvishamiso, iyo matoyi anouya kuhupenyu. Uye iyo yakapihwa Jack, yenguruve nyowani yeKisimusi (kutsiva kwaDito), ichavhiringidza chirongwa chine njodzi: cherwendo rwemashiripiti kuyedza kupora nekuponesa uyo anga ari shamwari yepamoyo yaJack.
Mushure me trilogy Las Cenizas de Hispania uye Zita raMwari, dzoka Jose Zoilo neino novel ikozvino neVikings.
Isu tiri muzana remakore rechipfumbamwe uye Hrolf ragnallson asiya rake Norway native kugara nemhuri yake kure Erin, kwaanozove murume. Zvakare, sedangwe, achave ari pamusoro pekubata Gondo reDutu nekunongedza varume vake kune mamwe maganhu kuti vawane hupfumi uye mukurumbira. Uye ivo vachatarira maziso avo pa Al Andalus. Vasati vasvika kumahombekombe e Gallecia nechinangwa chekutora zvavanowana munzira yavo pasina kunetsa. Asi havazivi izvozvo Ramiro, mambo weAsturian, afunga zvekurwa. Uto reViking rakundwa uye Hrolf inotorwa neboka reAsturians. Anova muranda uye anonzi "Lordemano", saka achafanirwa kuita zvese zvaanogona kuti ararame.
Theodora, iyo Chrysalis yeByzantium - Jesu Maeso de la Torre
Rimwe remazita makuru enhoroondo yenhoroondo ndeya Jesu Maeso de la Torre, iyo inotangisa iri basa nyowani. Ino nguva inotitorera kuenda kuConstantinople muna548, uko Empress Theodora, mudzimai waMambo Justinian, achangobva kufa mukutambudzika kukuru kwevanhu vake. Uye uyo anomuchema zvikuru ndiNasica el Hispano, mukuru mukuru ane simba kudare.
Akaenda naye muhupenyu hwake hwese hune zviitiko uye iye achazofunga kunyora chaiyo nyaya yaTeodora, mukadzi akangwara, anonyengera uye ane moyo muhombe, asi zvakare asingagone uye ane simba paakange achifanira kuve.
Blacksad 6 - Zvese Zvinowira (Chikamu Chekutanga) - Juan Diaz Canales y Juanjo Guarnido muchengeti wemufananidzo
Ndiwo mutambo wegore, pasina kukahadzika, kunyanya kune vazhinji vanopfuura vateveri - pakati pavo vandinozviverenga nekuzvipira - kweizvi anthropomorphic mutikitivha katsi kubva kuma50s anonzi John blacksad. Wako chikamu chechitanhatu, Zvese zvinowira pasi, inova chikamu chekutanga chenyaya nyowani iyi. Anga ari Makore mashanu ekumirira uye zvimwe zvakawonekwa pachikamu chechipiri. Asi ndomaitiro ekugadzirwa kwerudzi urwu rwemaalbum, anochengetwa uye ane mbiri seyiyi saga yakagadzirwa nemutambi wedu wekatuni uye munyori wechiratidziro Juanjo Guarnido naJuan Díaz-Canales.
Ino nguva isu tine Blacksad mukati New York, kwaanozopinda mune yake yepasi uye yepamusoro yezvematongerwo enyika uye zvemari mabhaisikopo mune imwe nyaya iyo ini ndine chokwadi chekuti vachatiziva isu zvishoma uye vachatiita vapfupi kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Gumiguru. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa